आज पनि घट्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो….. – SUDUR MEDIA
August 2, 2021 AdminLeaveaComment on आज पनि घट्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो…..
काठमाडौँ । साताको दोस्रो दिन अर्थात आज सोमबारको दिन पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेको छ । हिजो आइतबारको दिन प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ आज भने प्रतितोला १ सय रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अनुसार आज सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस्: सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ यहि २० गते खुल्दै ! सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले साउन २० गतेदेखि ६० करोड बराबरको ६० लाख कित्ता आईपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ।
कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ। कम्पनीले असार ९ गते आईपिओ निष्कासनको अनुमति माग गर्दै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो। १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी रहेको यस कम्पनीले आईपिओ बिक्रि तथा प्रबन्धकको जिम्मा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई दिएको छ। आईपिओ जारी गरेपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी २ अर्ब बराबरको पुग्ने भएको छ।
यसअघि साउन १४ गते मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको साधारण सेयर (आईपीओ) खुलेको छ। ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता अर्थात ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको आईपीओका लागि प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले न्युनतम् १० कित्तादेखि आवेदन दिन पाइनेछ । कुल निष्काशन भएको सेयरमध्ये ६ लाख ८४ हजार ७४६ कित्ता सेयर खरीदका सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन्।